‘फेशन शो’ मा २० करोडको ब्रा लगाउने भाग्यमानी मोडल !
काठमाडौँ । चीनको संघाईमा हालै सम्पन्न एक फेसन शोमा एक मोडलले लगभग २० करोड ७८ लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको ब्रा लगाएर मोडलिङ गरेकी छन् ।
२७ बर्षिय ब्राजिलियन मोडल लाइस रिबेरियोले यति महँगो ब्रा लगाएर फेशन शोमा भाग लिने मौका पाएकी हुन् । यति महँगो ब्रा लगाएर शोमा भाग लिन पाउने भाग्यमानी मोडलको रुपमा उनलाई अहिले संसारभर चर्चा गरिएको छ ।
‘भिक्टोरिया सेक्रेट फेशन शो’ मा विश्वभरका चर्चित मोडलहरुले भाग लिएका थिए ।
‘भिक्टोरिया सेक्रेट फेन्टासी ब्रा’ नाम दिइएको सो ब्रा करिब ३५० घण्टा लगाएर बनाइएको आयोजकले बताएका छन् । यसमा ६ हजार बह्न्दा बढी जेम्स स्टोनको प्रयोग गरिएको छ भने यसमा १८ क्यारेटको सुनको प्रयोग पनि गरिएको छ ।
बार्षिक रुपमा आयोजना हुने ‘भिक्टोरिया सेक्रेट फेशन शो’ यस पटक पहिलो पटक आयोजना चीनमा गरिएको भएपनि विवादबाट भने मुक्त हुन् सकेन ।
यस फेशन शो मा भाग लिने कैयौ मोडललाई चीनले भिसा दिन अस्विकार गरेको चर्चा चलेको छ । चर्चित मोडल गिगी हदिद, जुलिया बेल्याकोभा, इरिना शरिपोभा जस्ता मोडललाई चीनले भिसा दिन अस्विकार गरेकाले यस फेशन शो मा भाग लिन नसकेको फेश्निष्टाले रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ ।
त्यस्तै चर्चित गायिका केटी पेरीपनि यस फेशन शोमा भिसा कै कारण आउन नसकेको बताइएको छ । यस फेशन शोलाई नोभेम्बर २८ मा सिबिएस च्यानलमा टेलिकाष्ट गरिने आयोजकले जनाएका छन् ।
मोडल बालात्कार प्रकरण प्रहरीले छानबिन गर्ने, रोनाल्डोले भने चर्चामा आउन मेरो नाम प्रयोग भयो
काठमाडौँ। स्टार फुटबलर क्रिस्टियानो रोनाल्डोले एक मोडललाई बालात्कार गरेको भन्ने प्रकरणमा लस भेगासको प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। तत्कालिन मोडल र हाल स्कुल शिक्षक रहेकी काथरिन मायोरगालाई रोनाल्डोले छुट्टीमा अमेरिकाको लस
टीभीको लाइभ कार्यक्रममै मोडलले दर्शकलाई कुटिन् !
युरोप । एक रसियाली मोडलले एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आफ्नो गर्भावस्थालाई लिएर आलोचना गर्ने दर्शकलाई कुटेकी छिन् । तेस्रो बच्चा जन्माउने तरखरमा रहेकी एभेलिना ब्लेडन्सले टिभीको लाइभ कार्यक्रममै उक्त हर्कत गरेकी हुन्